महिला कृत्रिम रुचाउने गर्न बच्चा स्थानान्तरण गर्न चाहने द्वारा प्रयोग गरिन्छ जो lactation, रोक्न एउटा तरिका - यो छाती को Ligation। तर यो विधि एकदम असुरक्षित छ। तपाईं लुगा कसरी र एकै समयमा के छाती खातामा अवस्थाको लिन र नियम पालन थाहा छैन भने, तपाईंले गम्भीर आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ।
अनुचित प्रक्रिया मात्र दुखाइ हुन्छ। को छाती मांसपेशीमा को Tissues मा विनाशकारी परिवर्तन, साथै भडकाऊ र mastitis वा lactostasis को घटना संग fraught छ जो सबै भन्दा mammary ग्रंथि, मा ठहराव सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहे यो छाती पोशाक गर्न आवश्यक छ?
कृत्रिम रुचाउने गर्न क्रमिक संक्रमण
एक महिलाले mammary ग्रन्थीहरूको एक भडकाऊ रोग (उदाहरणका लागि एउटै सुट,), निपल, ट्यूमर मा herpes घाउ, र यति मा। डी तर त्यसपछि डाक्टर निर्धारित lactation को समाप्ति बाटो पत्ता गर्दा जरुरी निहत्था आवश्यक छ। आधुनिक चिकित्सा लागूपदार्थ मात्र एक ट्याब्लेट प्राप्त पछि दूध उत्पादन अवरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
कुनै आकस्मिक सङ्केत गर्छ भने, यो विधि प्रयोग गर्न राम्रो छ - स्तनपानको आकस्मिक निकासी बच्चाको मन र आफ्नो समग्र स्वास्थ्य मा नकारात्मक प्रभाव छ। प्राकृतिक र सुरक्षित एक क्रमिक निहत्था छ।
कसले (, त्यसपछि राति पहिलो दिन) स्तन-रुचाउने को संख्या एक हरेक दिन को लागि कम,2वर्ष गर्ने शक्ति को प्रतिस्थापन सुझाव दिन्छ। यो उमेर गरेर, बच्चा गरेको sucking सहज क्रिया हराउँछ, र उहाँले प्रक्रिया स्वाभाविक निहत्था पार। कुनै अतिरिक्त उपाय मात्र ध्यान दिएर बाँकी दूध decant गर्न आवश्यक छ। थप शक्ति अनुवाद गर्न सक्छन् र त सानो उत्पादन गर्ने आमाहरु, पहिले नै एक वर्ष पुरानो बच्चा छ। बिल्कुल कुनै हानि उहाँले प्रहार गरेनन्।
र तपाईं अझै पनि छाती माथि बाँध आवश्यक भएमा? प्रशिक्षण
जो (ठूलो उत्पादन बन्द भुक्तानी गर्न वा कारण दूध गरिब गुणस्तर उदाहरणका लागि,) एक महिला यस्तो असुरक्षित तरिका छान्नुभएको छ कारण जो कारण, त्यो छाती कसरी बाँध थाहा गर्न आवश्यक छ। यो पहिलो उपचार गर्न पूर्व कृत्रिम मिश्रण संग एक बच्चाको आहार परिवर्तन सुरु महिनाको लागि मनमोहक छ।
ड्रेसिङ दिन मा दूध को secretion उत्साहित राख्न तरल पदार्थ सेवन सीमित गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले शरीर मा पानी राख्ने अचार त्याग्न पर्छ। ड्रेसिङ बीच, बेचैनी र दुखाइ को जोखिम कम गर्न राम्रो पत्थर र प्राकृतिक सामाग्री बिना ब्रा लगाउने।
प्रक्रिया को लागि नै पट्टियाँ आवश्यक हुनेछ। तिनीहरूले लामो र बाक्लो कुरा को कुनै पनि टुक्रा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। एक पाना वा तौलिया फिट हुनेछ। यसबाहेक, तपाईं औषधि पसल मा किन्न आवश्यक camphor।
कसरी छाती बाँध गर्न
प्रक्रिया अघि, दूध व्यक्त वा छोराछोरीलाई खुवाउन आवश्यक छ। यो छाती खाली हुनुपर्छ। यो पूर्ण रगत प्रवाह लागि आवश्यक अवस्था सिर्जना गर्न र ठहराव को जोखिम कम गर्नेछ। तर प्रत्येक लाउने पछि आफ्नो बच्चा खुवाउन छैन आवश्यक छ। निपल उत्तेजना दूध उत्पादन प्रकुपित।
camphor तेल मा भिगो लोचदार पट्टी को पट्टी, सम्पूर्ण स्तन rewinds। यो अलि कति दबाब exerting, छाला गर्न खासा फिट हुनुपर्छ, तर एकै समयमा पट्टी वा hematomas को निशान नछोडी। सफल असम्भाव्य सामना, त्यसैले यो एक प्रेम एक पहिले छाती कसरी ड्रेस उसलाई बताए मदत माग्न राम्रो छ। पट्टियाँ तल्लो करङहरु गर्न armpits देखि शरीर को सम्पूर्ण सतह कवर गर्नुपर्छ। विधानसभा सजिलो लागि फिर्ता मा बाँकी छ।
पहिलो डाली6घण्टा पछि हटाइएको छ। तर दूध र छाती धेरै यसमा धेरै दबाव सुरु भने, यो हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। बच्चा खुवाउने पछि, यो फेरि लगाएको हुनुपर्छ। र यति लामो दूध उत्पादन एकदम कम छैन रूपमा थियो। यो सामान्यतया 1-2 हप्ता लाग्छ।
lactation कम गर्न थप तरिकाहरू
हामी दूध उत्पादन कम गर्न छाती पट्टी कसरी हेर्नुभयो। यो विधि प्रभावकारी पूरक हुन सक्छ। संग camphor रक्सी compresses। तिनीहरूले रक्त सुधार र mastitis विकास जोगिन मदत। तर camphor सामाग्री को स्लट बनाउन आवश्यक त, Nipples सम्पर्कमा हुनु हुँदैन। समाधान नै एक पानी स्नान मा गरम संकुचन र न्यानो पानी मा शांत गर्न अनुमति गर्न।
अर्को प्रभावकारी विधि - एक खेल। पसिना मार्फत शरीर देखि तरल पदार्थ को Excretion तीव्र योगदान हुनेछ lactation को समाप्ति। यो पनि पानी उपचार गर्न मद्दत गर्नेछ। को स्नान को तापमान नाघ्न हुँदैन 37 ° सी ठूलो दक्षता लागि पानी वा टंकशाला मसलाको तेल थप गर्न सकिन्छ, 5-7 खस्छ मात्र।
तपाईं पट्टियाँ तान्नुहोस् भने (वा पछि) त्यहाँ दुखाइ वा पुछ्ने कुनै पनि असामान्य र भयावह परिवर्तन हो, तपाईं छाती पोशाक जारी गर्न आवश्यक कि विचार गर्नुहोस्। चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् निश्चित हुनुहोस्।
चिकित्सा तयारी एक बिट
पहिले नै उल्लेख रूपमा, फार्मेसी lactation उपज सधैं मातृ र बाल स्वास्थ्य मा सकारात्मक प्रभाव नभएका धेरै छिटो परिणाम रोक्न हो। यी लागूऔषधको कार्य हर्मोन ओक्सीटसिन र prolactin, दूध को उत्पादन को लागि जिम्मेवार गर्न जोखिम कारण छ।
बिरामीको सामान्य राज्य आधारमा चिकित्सक "Dostinex", "Bromocriptine", "Parlodel" वा अरूलाई रजस्टर। ती सबै (घ त्यसैले चक्कर आना, ऐंठन, वाकवाकी र।।) contraindications र साइड इफेक्ट को एक नम्बर छ। तर यदि तपाईं यस्तो छाती पट्टी वा हर्मोन चक्की लिएर रूपमा विधिहरू बीच चयन, डाक्टर अझै पनि उत्तरार्द्ध सिफारिस गर्नेछ। प्रभाव गायब छेउमा सबै प्राप्त को समसामयिक रद्द भएको।
lactation ऋषि कम गर्छ। यसलाई जो prolactin को कार्य दबाउन phytoestrogens, समावेश छन्। यो यस्तो ट्यूबल छाती वा हर्मोन ट्याब्लेटको रूपमा गम्भीर जटिलताहरू पैदा गर्दैन। हो, र यसको प्रयोग गर्न सुविधाजनक छ: एक फार्मेसी तपाईं बस पानी उम्लिरहेको खन्याउन र सिफारिस खुराक पिउने समाप्त चिया बेच्छ। ऋषि cinquefoil प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ सेतो वा चमेली।
यो पनि बन्दागोभी पात को छाती लागू हुन्छ, एक रोलिंग पिन प्रि-मसले। सबै रस शरीर मा भिजेको मात्र पछि तिनीहरूलाई हटाउनुहोस्। डाक्टर संग परामर्श पछि, तपाईं diuretic लोक उपचार (साग, cranberries, horsetail) को एक सप्ताह लामो पाठ्यक्रम मा खर्च गर्न सक्छन्।
यो छाती माथि बाँध गर्न सम्भव छ? निस्सन्देह, सबै भन्दा राम्रो विकल्प एक क्रमिक निहत्था छ। चिकित्सा कारण लागि, तपाईँले lactation छिटो अवरोध आवश्यकता हो, यसलाई आवश्यक औषधिहरू प्रयोग गर्न छ। एक लाउने छाती सुरक्षित लोक उपचार, compresses, स्नान र यति मा। डी तपाईंलाई यसको प्रयोग भने, यो केवल नियम अनुसार छ, समग्र स्वास्थ्य स्थिति र स्तन मा कुनै पनि परिवर्तन राख्न प्रतिस्थापित हुनुपर्छ।
ओल्गा Papsueva - खुसी pensioner र लोकप्रिय YouTube
घरेलु पनिर संग पकौडी: को युक्रेनी राष्ट्रिय व्यञ्जन को नुस्खा
केन्द्रीय आर्थिक क्षेत्र - रूस को इतिहास र अर्थव्यवस्था को कोर
बच्चा खाना लागि आहार: समीक्षा, मेनु परिणाम। सर्वश्रेष्ठ बच्चा खाना आहार
गर्भावस्थाको लागि प्लटहरू: समीक्षाहरू
महिला मा कम फिर्ता दुखाइ को कारण के हुन सक्छ?
राउन्ड गलैँचा - सजावट गर्न डिजाइन साथै